တွေ့ဆုံခြင်းဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူး – Shinyoon
တွေ့ဆုံခြင်းဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူး
လူနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံခြင်းဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူး ရေစက် ပါခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀ဋ်ကြွေးပါခဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်
ဘ၀မှာ . . . ရေစက်ပါလို့ တွေ့ဆုံရတဲ့လူတွေအပေါ် တန်ဖိုးထားပါ ကြုံရဆုံရတယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို ခဏလေးပါ အဲ့ဒီခဏလေးမှာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ် မကြာခင် လမ်းခွဲခြင်းတွေ ကွဲကွားခြင်းတွေ ရောက်လာမှာလား မရောက်လာဘူးလားဆိုတာ ဘယ်သူ့မှ တပ်အပ်မပြောနိုင်တဲ့အတွက် အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့လူတွေအပေါ်
ပြန်ပြီး ဂရုတစိုက်လေးရှိပါ ဘယ်အရာမှ ကြိုပြောလို့မရနိုင်သလို ကြိုပြီးလဲမသိနိုင်ဘူးလေ အဓိကက ခွဲခွါသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က နောင်တရမနေဖို့ အရေးကြီးတယ် ငါ ဂရုမစိုက်လိုက်ရလေခြင်း တန်ဖိုးမထားမိလေခြင်းဆိုတဲ့ နောင်တတွေက သေလောက်အောင် နာကျင်ရပါတယ် ဒါကြောင့် ရေစက်ပါလို့ ဆုံရတဲ့လူတွေအပေါ် တန်ဖိုးထားပါ
ဘယ်ခွဲခွါခြင်းမှာမှ နောင်တတွေ မရစေချင်ဘူး ။၀ဋ်ကြွေးပါလို့ ဆုံတွေ့ရတဲ့အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး ၀ဋ်ကြွေးကျေတဲ့အထိသာ ဆပ်ပါ ၀ဋ်ကြွေးဆိုတာ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ရှောင်ပြေးလို့လဲ မလွှတ်မယ့်အတူတူ ဒီဘ၀ ဒီမျှသာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အကျေသာဆပ်ခဲ့ ၀ဋ်ကြွေးကုန်လို့ လမ်းခွဲရတဲ့အခါ တစ်ခါတည်း မေ့ပစ်လိုက်ပါ
တွေ့ဆုံခြင်း လမ်းခွဲခြင်းတွေဟာ လောကဓံတွေထဲက တစ်ခုပါ သို့သော် ရေစက်ပါခဲ့လို့ ဆုံခဲ့ရတာလား ၀ဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ တွေ့ခဲ့ရတာလားဆိုတာတော့ ခွဲခွါသွားတဲ့အခါ သိရပါလိမ့်မယ် ။
လူႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕ဆုံျခင္းဟာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ေရစက္ ပါခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀ဋ္ေႂကြးပါခဲ့လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္
ဘ၀မွာ . . . ေရစက္ပါလို႔ ေတြ႕ဆုံရတဲ့လူေတြအေပၚ တန္ဖိုးထားပါ ႀကဳံရဆုံရတယ္ဆိုတာ တကယ့္ကို ခဏေလးပါ အဲ့ဒီခဏေလးမွာ ကိုယ္တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔လိုတယ္ မၾကာခင္ လမ္းခြဲျခင္းေတြ ကြဲကြားျခင္းေတြ ေရာက္လာမွာလား မေရာက္လာဘူးလားဆိုတာ ဘယ္သူ႔မွ တပ္အပ္မေျပာႏိုင္တဲ့အတြက္ အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အေပၚမွာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတဲ့လူေတြအေပၚ
ျပန္ၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ေလးရွိပါ ဘယ္အရာမွ ႀကိဳေျပာလို႔မရႏိုင္သလို ႀကိဳၿပီးလဲမသိႏိုင္ဘူးေလ အဓိကက ခြဲခြါသြားတဲ့အခါ ကိုယ့္ဘက္က ေနာင္တရမေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ငါ ဂ႐ုမစိုက္လိုက္ရေလျခင္း တန္ဖိုးမထားမိေလျခင္းဆိုတဲ့ ေနာင္တေတြက ေသေလာက္ေအာင္ နာက်င္ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေရစက္ပါလို႔ ဆုံရတဲ့လူေတြအေပၚ တန္ဖိုးထားပါ
ဘယ္ခြဲခြါျခင္းမွာမွ ေနာင္တေတြ မရေစခ်င္ဘူး ။၀ဋ္ေႂကြးပါလို႔ ဆုံေတြ႕ရတဲ့အခါ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ၀ဋ္ေႂကြးေက်တဲ့အထိသာ ဆပ္ပါ ၀ဋ္ေႂကြးဆိုတာ သိပ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ေရွာင္ေျပးလို႔လဲ မလႊတ္မယ့္အတူတူ ဒီဘ၀ ဒီမွ်သာဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ အေက်သာဆပ္ခဲ့ ၀ဋ္ေႂကြးကုန္လို႔ လမ္းခြဲရတဲ့အခါ တစ္ခါတည္း ေမ့ပစ္လိုက္ပါ
ေတြ႕ဆုံျခင္း လမ္းခြဲျခင္းေတြဟာ ေလာကဓံေတြထဲက တစ္ခုပါ သို႔ေသာ္ ေရစက္ပါခဲ့လို႔ ဆုံခဲ့ရတာလား ၀ဋ္ေႂကြးဆပ္ဖို႔ ေတြ႕ခဲ့ရတာလားဆိုတာေတာ့ ခြဲခြါသြားတဲ့အခါ သိရပါလိမ့္မယ္ ။
လမ်းခွဲပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်လှည့်မလာပါနဲ့
ငိုမယ်ဆိုရင် ငိုပါ …. ငိုပြီးသွားတဲ့အခါ တိတ်ဖို့လိုတယ်